ट्युमरपीडित ढाँट भन्छिन् : भगवानले पनि गरिबलाई नै ठग्ने रहेछ
शेर भण्डारी डडेल्धुरा, २४ फागुन
सुदूरपश्चिममा अहिले पनि धेरै मानिसहरू गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । गरिबीका कारण के खाने ? के लगाउने ? भन्ने समस्याबाट ग्रस्त छन् यहाँका मानिसहरू ।
साँझ–बिहानको छाक त जसोतसो अरूको घरमा ज्याला मजदुरी गरेर टारिरहेकै छन् तर बिरामी पर्दा भने मरौँ कि बाँचौँ भन्ने अवस्थामा पुग्छन् यहाँका मानिसहरू ।
उपचार गरौँ भने जिल्लामा कम खर्च लाग्ने र राम्रो सेवा, सुविधा भएको अस्पताल डडेल्धुरामा छैनन् । डडेल्धुरामा भएको एक मात्र संघीय सरकार मातहत रहेको डडेल्धुरा अस्पताल चिकित्सक अभावले आफैँ थला परेको छ । यहाँका स्थानीयहरूले सामान्य उपचार गर्न पनि हजारौँ रुपैयाँ खर्च गरेर जिल्लाबाहिर गएर उपचार गराउन बाध्य छन् ।
गरिब, असहायहरू यहाँ बिरामी भयो भने अकालमै तड्पीतड्पी ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । हुने खानेहरू त जसोतसो गरेर आआफ्नो उपचार गराइहाल्छन् तर गरिबहरू भने भगवानको भरोसामा बसिरहेका छन् । बिरामी भइहाले पनि कसैले उपचार गरिदेला र बिरामीबाट मुक्त भइएला भन्ने पर्खाइमा बसिरहेका छन् उनीहरू ।
यस्तै पर्खाइमा बसेकी छन्– डडेल्धुराको अमरगढी– ८ की कलावती कुमारी ढाँट । ढाँट अहिले २३ वर्षकी भइन् । उनको घरमा अहिले ३ जना छन्– भाइ, बुबा र आफू । ढाँटकी दिदीको गत वर्ष विवाह भएको थियो भने आमाको टाउकोमा ट्युमर भएर गत वर्ष उपचारको क्रममा काठमाडौंको वीर अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो ।
गरिबीका कारण एकातिर ढाँटको परिवार पिल्सिएको छ भने अर्कोतिर उनको टाउकोमा ट्युमर आएको र नसा सुकेकाले उनी उपचारका लागि सहयोग खोज्दै तड्पिरहेकी छन् ।
‘कक्षा १२ सम्म आमाबुबाले जसोतसो गरेर त पढाए, त्यसपछि उपचार गराउँदा गराउँदै आमाको पनि मृत्यु भयो’, उनले भनिन्, ‘गरिबीकै कारण पढाइ छाडेर काम गर्न काठमाडौं गएँ । काठमाडौं गएर केही समय काम गर्न नपाउँदै एक्कासि बिरामी भएँ । वीर अस्पतालमा उपचार गराउँदा टाउकोमा ट्युमर र नसा सुकेको देखियो ।’
वीर अस्पतालमा डाक्टरले उपचार सम्भव नभएको र दिल्लीमा गएर उपचार गर्ने सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । ‘एकातिर परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ, अर्कोतिर म बिरामी छु । भाइ पनि कक्षा १२ मा पढ्छ । बुबाले खेती किसानी गर्नुहुन्छ । प्रिवारको छाक टार्ने कि भाइलाई पढाउने कि मेरो उपचार गर्ने ? समस्यामा हुनुहुन्छ’, रुँदै उनले भनिन् ।
वीर अस्पतालमा उपचार गर्दा जसोतसो ३ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर उपचार गरेको भए पनि वीर अस्पतालमा उपचार सम्भव नभएपछि त्यहाँका डाक्टरहरूले दिल्ली गएर उपचार गराउन सुझाव दिएको उनको भनाइ छ ।
‘आमाको उपचार गराउँदा भएभरको सम्पति सबै सकियो । त्यसपछि म बिरामी भएँ । अब उपचार कसरी गर्ने ? भगवानले पनि हामी गरिबहरूलाई नै ठग्ने रहेछ’, उनले भनिन्, ‘दिल्लीमा उपचार गराउँदा ८–१० लाखजति चाहिन्छ भनेको छ । त्यसैले म सहयोगको पर्खाइमा बसेकी छु ।’
कलावतीकुमारी ढाँट अहिले सहयोगको खोजीमा आफैँ भौँतारिइरहेकी छन् । अहिले उनी आफू बिरामी भए पनि सहयोग खोज्न विभिन्न विद्यालय तथा संघसंस्थामा धाइरहेकी छन् । थुप्रैले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको उनी बताउँछिन् ।
सहयोगको खोजीमा अमरगढी नगरपालिका जाँदा नगर प्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले धेरै पैसा नगरपालिकाले सहयोग गर्न नसक्ने भए पनि उपचार गराउँदाका बिलहरू ल्याएपछि प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय गरिदिने आश्वासन दिएको उनले बताइन् ।
नगर प्रमुख ओझाले पनि आफू जनताको जनप्रतिनिधि भएकाले सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन् । यसका बारेमा कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्ने उनको भनाइ छ । ढाँटको उपचारका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर जति सक्दो सहयोग गर्ने उनले बताए ।
विभिन्न संघसंस्था तथा विद्यालयबाट अहिलेसम्म सहयोग नपाए पनि आश्वासन भने पाएको ढाँटको भनाइ छ ।
आर्थिक सहयोगका लागि अपिल
गाउँघरमा आफन्त, छरछिमेकबाट पैसा जुटाउँदा पनि चिकित्सकले भनेअनुसार पैसा जुट्न नसक्ने भएकाले उनले आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गरेकी छन् ।
आर्थिक सहयोग गर्न चाहनेहरूले कलावतीकुमारी ढाँटको नाममा रहेको एनआईसी एशिया बैंकको खाता नं. २५८७००३२७४१५२४०१ मा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, फागुन २४, २०७६, ०८:०५:००
बैतडीका स्वास्थ्यकर्मीका लागि ४० थान पीपीई उपलब्ध